कालापानी नजिकको नेपाल-भारत सीमामा सशस्त्र प्रहरीको गस्ती शुरू, हेर्नुस् फोटोमा | Nepal Ghatana
कालापानी नजिकको नेपाल-भारत सीमामा सशस्त्र प्रहरीको गस्ती शुरू, हेर्नुस् फोटोमा
प्रकाशित : १ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १९:१९
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको व्याँस गाउँपालिका–१ छाङ्रु (गागा) मा बुधबार स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा निगरानी चौकी (विओपी)ले दुई देशबीचको सीामान वरपर गस्ती सुरु गरेको छ । बिहीबार प्रहरी टोली महाकारी नदी किनारा र सीमा क्षेत्र वरिपरि गस्ती गरेको छ ।
व्यास गाउँपालिका–१ छांगरुमा ३१ वैशाखमा सशस्त्रको बीओपी स्थापना गरिएको थियो। बीओपी स्थापना भएसँगै सशस्त्रले आज बिहानदेखि नेपाल–भारत सीमामा गस्ती शुरू गरेको हो।
सशस्त्रसँगको गस्तीमा आज गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्रा. डा. इन्द्रजित राई पनि सहभागी थिए।
बिहीबारै सीमा जोडिएको महाकाली नदीमाथिको काठेपुल (सीतापुल) मा गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्रा.डा इन्द्रजित राईसँग कुरा भारतीय एसएसबीका प्रतिनिधिले कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीका क्रममा छाङ्रुस्थित सुरक्षा निगरानी पोष्टका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक लिलीबहादुर चन्द पनि सहभागी रहेका थिए ।
चौकी स्थापना भएको भोलिपल्ट सशस्त्र प्रहरीका जवनाहरु आवश्यक हतियार र बन्दोबस्तीका सामान व्यवस्थापनमा व्यस्त रहे । आवश्यक हतियार र सामान नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले केही माथि झारेको थियो । भारतले नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक बनाउन थालेपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोष्टको स्थापना गरेको हो ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा बाटो बनाएपछि छा‌गरुमा बीओपी स्थापना गरिएको हो।
छाङरु (गागा) मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा सुरक्षा निगरानी चौकी (विओपी) का लागि आवश्यक सशस्त्र प्रहरीसहित खाद्यान्न र बन्दोबस्तीका सामान झार्दै नेपाली सेनाको हेलिकप्टर।
बुधबार स्थापना गरिएकोे सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सीमा निगरानी चौकी (विओपी) का लागि आवश्यक हतियार र बन्दोबस्तीका सामान ओसार्दै सशस्त्र प्रहरी